Goobaha Khadka Tooska ah ee Roomaaniya - Koodhadhka Gunnada ee Khadka Tooska ah ee Khadka
(235 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ... Dhammaan noocyada khamaarka ee Romania maanta waa gebi ahaanba sharci iyo baahsan. Wadanku wuxuu leeyahay taariikh dheer oo khamaar sharci ah tan iyo sanadkii 1906, markii la sameeyay Nasiibkii Qaranka ee Bakhtiyaanasiibka Romana. Intii lagu gudajiray kaligii taliskii shuuciga ahaa ee Nicolae Ceausescu khamaarka waxaa lagu cadeeyay inuu yahay mid sharci daro ah, laakiin 1990 maamulkii waa la afgembiyay, khamaarka ayaa markale sharci noqday. Kasiinadii ugu horreysay ee Romania ka dib shuuciyadii, ayaa la furay 1991.
Maanta Romania in ka badan 20 casinos, iyo sidoo kale in kabadan 20,000 mashiinno naadi ah, oo ku yaal xarumaha dukaamaysiga, makhaayadaha iyo goobaha kale ee dadweynaha ee waddanka. Sharadka isboortiga sidoo kale waa gabi ahaanba sharci, inta badan magaalooyinka waaweyn ee Romania, waxaad ka heli kartaa buugaag sameeyayaal leh saami sare. Dhaqanka khamaarka ee Romania si dhakhso ah ayuu u bislaaday, warshaddu hadda waxay ku taal waddanka waa horumarsan tahay.
Khamaarista online ee Romania
Khamaarka khadka tooska ah ee Romania ayaa dhawaan uun sharci noqday iyadoo la abuuray Hay'adda Qaranka ee khamaarka (Xafiiska Ciyaaraha Qaranka) Abriil 4, 2013. Tan ka hor, khamaarka internetka wuxuu ahaa mid farsamo ahaan sharci ahaan laga soo bilaabo 2010, markii sharciga la soo saaray sharciyeynta goobaha khamaarka internetka ee Romania. , haysashada shatiga gobolka. Si kastaba ha noqotee, maqnaanshaha hay'adda sharciyeynta iyo iyadoo la raacayo sharciga ciyaaraha qamaarka ee Romania, hawlwadeennada ma aysan awoodin inay dalbadaan.
Maanta waddanka waxaa jira casinos badan oo ajnabi ah oo loo heli karo Romanians. Xusuusnow in mid ka mid ah shirkadaha maxalliga ah uusan helin rukhsadda sannadka 2014. Kuwa sameeya buugagga internetka ayaa sidoo kale caan ka ah Romania, laakiin haddana waa inta badan ajaanibta waaweyn ee aan ruqsadaha haysan Romanka.
Liiska ugu sareeya ee 10 Romain Online Casino
Qamaarka oo ku nool Romania
Romania - Badda Madow waa muuqaal qurxoon, dooxada sixirka ee Danube, harooyin fara badan iyo buuro qurux badan, ruuxda jacaylka jacaylka iyo halyeeyada suugaanta. Laakiin xitaa socotada dhammaan xulashooyinka way furan yihiin markay tahay khamaarka, maxaa yeelay waa loo oggol yahay waddanka oo waxaa lagu soo bandhigaa dhammaan noocyadeeda kala duwan. CasinoToplists ayaa loo diray Bucharest si ay u bartaan warshadaha khamaarka ee Romania.
Romania - halkaasoo waliba taariikh yar ka jirto;
Sharci iyo shatiyeysi;
Xadka adag ee shirkadda gawaarida.
Bandhigga caanka ah ee ugu caansan Romania:
Network Casino Casino;
Khamaarka internetka: waa sharci sharci-dejiyeyaasha maxalliga ah iyo kuwa shisheeye;
Shan goobood oo ka mid ah Roomaaniya ee Bucharest oo leh cinwaanada caasimadda;
Xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan Romanya iyo Romaaniyiinta.
Goobta Roomaanka iyo asalka taariikheed ee kooban
Romania waxay ku taal koonfurta-bari Yurub. Maanta, waa jamhuuriyad baarlamaani ah oo ay hogaamiyaan Madaxweyne Klaus Johannis iyo Raiisel wasaare Victor Ponta. Caasimada dalka waa magaalada qadiimiga ah ee Bucharest.
Dhulka Romania waxaa deganaa Cro-Magnon 42 000 sano ka hor. Intii lagu guda jiray Boqortooyadii Roomaanku dhulalku waxay qayb ka ahaayeen halabuurkeedii. By habka, magaca casriga ah waxaa loo tarjumay "Roman".
Qarniyadii dhexe Romania waxay ka koobnayd Transylvania, Moldavia iyo Wallachia. Dhibaatooyinka ka dhashay dhulka da 'ahaan kala duwan awgood waxay ka mid ahaayeen Boqortooyadii Hangari iyo Boqortooyadii Cusmaaniyiinta.
Qeybtii labaad ee qarnigii XIX maamulkii Romania wuxuu noqday xuduudo jira. Abuuritaanku wuxuu dhammaaday kaliya qarnigii labaatanaad. Kacaankii Romania ka dib 1989 wuxuu bilaabay waji cusub oo taariikhi ah.
Laga soo bilaabo 2004 Romania waa xubin ka tirsan NATO, ilaa iyo 2007 - xubin ka ah EU.
Khamaarista iyo khamaarka Roomaaniga
Taariikhda casriga ah ee khamaarka ee Romania waxay soo bilaabatay 1990. Kadib afgembigii Ceausescu, wadanku wuxuu ku laabtay ganacsigii khamaarka. In kasta oo markii hore aysan jirin sharciyo sharciyeyn ah, waxay bilaabeen inay soo muuqdaan 1991 markii ay yimaadeen shirkadda Casino Aistria ee Austrian oo sameysay casaankii ugu horreeyay ee ugu weynaa caasimadda.
Sannadkii 1992 wuxuu ka soo muuqday Komishanka Ciyaaraha, oo raacay shaqada dhammaan xarumaha khamaarka. Sannadkii 1993-kii waxa ay meel marisay sharciyada canshuuraha ee casinos-ka. Ganacsi khamaarista ayaa helay sumcad aad u badan taas oo keentay in dowlada Romania ay soo saarto shati qasab ah sanadkii 1998. Waxaas oo dhan waxaa lagu sifeeyay sharciga “On Regulation of Khamaarka”
Tan iyo markii 1999, milkiilayaasha raasumaalka waxaa looga baahan yahay in ay u hoggaansamaan shuruudaha ruqsadaha, si loo abaabulo casino dhismayaal kala duwan, qolal hotel ama aan buuxin hawshooda tooska ah ee shineemooyinka.
Roomaaniya, waxay u oggolaatay qamaar dhawr ah:
ciyaaraha miisaska: turub, baastada, baccarat, blackjack, roulette, Punto Blanco;
Sharaxaad: Sharaxaad dheeri ah;
ciyaaraha oo isticmaalaya telefoonka iyo internetka.
Sharcigu waa ku adag yahay qabanqaabiyeyaasha madadaalada khamaarka. Fadlan u fiirso qaabeynta qolalka, tirada xarumaha taakuleynta, miisaska, ciyaaraha qurxinta iyo wixii la mid ah. Shatiga waxaa lagu heley oo keliya ku dhaqanka ganacsiga laftiisa, laakiin sidoo kale shati laga helaa mashiin kasta oo ciyaaro ah. Caadi ahaan, rukhsadaha ayaa shaqeynaya muddo
1-5 sano. Taariikhahaas kadib, waxaad u baahan tahay in mar kale lagu hubiyo, oo aad iibsato liisan cusub.
Dhammaan shaqaalaha xarumaha khamaarka ayaa dejiya xadka da'da, tusaale ahaan, agaasimayaasha - laga bilaabo 23 sano. Waxaa jira mamnuucyo dhowr ah oo la xiriira diiwaanada dembiyada ama ka shaqeynta adeegga bulshada.
Kahor intaan la furin casino, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo sanduuq dammaanad qaad ah. Waxaa loo xisaabiyaa shaqsi ahaan.
Rikoodhka caanka ah Romania
Romania, casinos badan oo buuxiya heerarka caalamiga ah. Xaqiiqdii waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee loo tixgeliyo silsiladda Casino Casino. Waxaa ku jira 9 hay'adood, oo ay ka shaqeeyaan qiyaastii 3000 oo qof. Shabakad - xubin buuxda oo ka tirsan Ururka Casino Casino. Martidu waxay helaan xaaladaha ugufiican ee lagu ciyaaro khamaar dhaqameed kasta.
Casino Bucharest - waa mid ka mid ah casinos-yada ugu caansan Bucharest, oo ku yaal badhtamaha magaalada hudheel hudheel ah oo 5 xiddig leh oo Intercontinental Hotel ah. Makhaayadu waa jawi: gudaha gudaha oo aan fiicnayn, adeeg si wanaagsan loo tababbaray, cunto aad u fiican - waxa aad ugu baahan tahay ciyaar raaxo leh. Jadwalka Casino Bucharest miiska shaqada 14 oo leh miisaska ciyaaraha 4 oo leh blackjack, miisaska roulette 7.
Mirage Casino - casino kale oo caasimad ah oo shaqeynaya tan iyo 2003. Waxay ku taal agagaarka hudheelka Ambassador Hotel ee ku yaal Magheru Boulevard. Xarun waasac ah waxay ku fadhidaa 1000 laba jibbaaran, waxaa jira laba qol oo VIP ah. Waxaa jira miisaska ciyaarta 12, waxaadna sameyn kartaa sharad laga bilaabo 1 euro.
Havana Princess Casino waxay ku taal bartamaha magaalada, iyadoo degta 1200 oo jibbaarane. Hay'addu waxay shaqaaleysiisaa xirfadlayaal aad u tababaran, oo u adeegta miisaska 12 ee ciyaaraha. Khadka tooska ah wuxuu diiradda saarayaa martida ajaanibta ah, oo inta badan halkan ku ciyaaraan safarro ka socda Shiinaha iyo Turkiga.
Bandhigyada internetka ee Roomaaniya
Taariikhda casinos online-ka ee Romania aad u qasan. In kasta oo khamaarka rasmiga ah ee khamaarka loo oggol yahay oo keliya 2015, dhab ahaantii server-yada Roomaaniyaanka ahi waxay leeyihiin goobo lagu ciyaaro oo muddo dheer ah. Sannadle miisaaniyadeed ayaa qulqulaya illaa nus bilyan euro.
Sharci ka samee casinos internetka ayaa isku dayay tan iyo sanadkii 2009, sanad walba, iyagoo soo bandhigaya biilal cusub. Laakiin miisaaniyad la’aanta sanadkii 2014 ayaa ugu dambeyn dowladda ku riixday inay sharciyeeysato. Hadda, dhulka Romania wuxuu si xor ah uga ciyaari karaa goobaha khamaarka aad ugu jeceshahay.
Romanian Athenaeum . Cinwaanka: Strada Benjamin Franklin 1-3, Bucureşti. Tani waa hoolka xafladaha quruxda badan ee dalka, oo badanaa loogu yeero wadnaha Bucharest. Dhismaha waxaa lagu dhisay 1888 qaab neo-classical leh walxaha elektarooniga ah. Gudaha raaxada iyo hantida gaarka ah.
Aqalka Baarlamaanka . Cinwaanka: Strada Izvor 2-4, Bucureşti. Astaamo ku yaal buurta Spiro - tusaalaha ugu fiican ee waqtiga hantiwadaagga, oo ka sarreeya Bucharest oo dhererkeedu yahay 86 mitir, kana tagaya dhulka 92 mitir.
Matxafka Qaranka . Cinwaanka: Şoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff 28-30, Bucureşti 011347. Bannaanka waxaa laga soo ururiyay 272 dhisme oo laga kala keenay qaybaha kala duwan ee dalka.
Matxafka Qaranka ee Farshaxanka Roomaaniya . Cinwaanka: 49-53, Calea Victoriei, 010063 Bucureşti. Matxafka ugu weyn ee farshaxanka Yurub iyo Roomaaniya oo leh bandhigyo 3,000 iyo 60,000 kayd ah.
Beerta Herke . Cinwaanka: Qeybta 1, Bucureşti. Waxaa la aasaasay 1936 oo ku taal hareeraha harada caanka ah ee ku taal qaybta waqooyiga ee Bucharest.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Romanya iyo Romaaniyiinta
Bucharest ayaa loo yaqaan Little Paris ee Bariga.
Bran Castle waxaa la dhisay qarnigii XIV - waa goobaha dalxiis ee ugu caansan dalka, tan iyo markii loo tixgeliyo inuu yahay magaca Count Dracula.
Romania waxay leedahay Maalinta Xorriyadda - 9 Meey. Laakiin tani maahan maalintii guusha ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka, waa maalintii xorriyadda laga qaatay Boqortooyadii Cusmaaniyiinta, oo la helay 1877.
Romania oo ku taal khariidadda Europe:
0.1 Khamaarista online ee Romania
0.2 Liiska ugu sareeya ee 10 Romain Online Casino
3 Qamaarka oo ku nool Romania
3.0.1 Goobta Roomaanka iyo asalka taariikheed ee kooban
3.1 Khamaarista iyo khamaarka Roomaaniga
3.1.1 Rikoodhka caanka ah Romania
3.2 Bandhigyada internetka ee Roomaaniya
3.2.1 Soojiidashada Bucharest
3.2.2 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Romanya iyo Romaaniyiinta
3.2.3 Romania oo ku taal khariidadda Europe:
casino soo dhaweynaya gunooyinka